» स्थानीय तहको चुनाव सार्न खोजियो भने एमालेले जनतालाई सडकमा उतार्छ : अग्निप्रसाद खरेल
संविधान, कानुन अनुसार जसको अवधि पुगेको छ, त्यसको निर्वाचन गर्नु प¥यो । स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा कानुन र संविधानले तोकेको अवधि भनेको त पाँच वर्ष न हो ! संविधानको धारा २२५ मा कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनासम्म निर्वाचन गराउन सक्ने सुविधा छ नि ?
संविधानको यो धारामा ‘पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्र गर्न सक्ने’ भन्ने त सुविधामात्र हो । त्यो अनिवार्य होइन, सुविधामात्र हो । यो संविधान निर्माण गर्दा संविधानको धारा २२५ मा राखिएको उक्त सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाका बारेमा पनि छलफल भएको छ । निर्वाचन आयोगको मस्यौदा गृहमन्त्रालय मार्फत राज्य व्यवस्था समितिमा आउँदा त्यसबारे पर्याप्त छलफल भएको थियो । म र राधेश्याम अधिकारी त्यतिबेला राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य थिएनौं । त्यो बेला हामी विधायन समितिका सदस्य थियौं । यद्यपि, हामीलाई संविधानसभामा भएका ‘लिगल एक्सपर्ट’का रुपमा राज्य व्यवस्था समितिमा बोलाइयो । हामीसमेत उपस्थित रहेर यो कानुन पास भएको हो ।